Soo dejisan PotPlayer 1.6.55390 iyo 1.6.55584 beta – Vessoft
Soo dejisan PotPlayer
PotPlayer – ciyaaryahan si loo maqli karo ee files audio iyo video. software ka kooban codecs badan dhisay-in si loo maqli karo ugu of qaabab warbaahinta. PotPlayer waa ay awoodaan in ay soo bandhigaan subtitles ah, Macdan track maqal ah ka video ah oo ku beddelato on muuqaalaynta halka ciyaaro ee files audio. software ka kooban qalabka reserved loo maqli file ee tayada sare. PotPlayer kuu ogolaanayaa inaad isku xiro daro ah in la ballaariyo fursadaha ay.
Support of video caan ah iyo qaabab audio
tayada loo maqli Sare
Support of qolfaha kala duwan, logos iyo mawduucyada midab
PotPlayer Software la xiriira: